दोस्रो ब्यक्ति जसले जिते एड्स रोग| Nepal Pati
दोस्रो ब्यक्ति जसले जिते एड्स रोग
लण्डन । संसारमा दोस्रो व्यक्ति जसलाई एड्स रोगबाट बचाउन सफलता मिलेको छ । लण्डन निवासी एड्स रोगीलाई १८ महिनाको उपचार पछि उक्त रोगबाट मुक्ति मिलेको जनाइएको छ । सन २००३ मा एचआइभी पोजेटिभ पाइएको विरामी उपचार पश्चात पुर्णतया ठीक भएका छन् ।
यस अघि सन २००७ मा टिमाेथी ब्राउन नाम गरेका अमेरिकी नागरिक एड्स भाइरसबाट मुक्त गरिएको थियो । द लण्डन पेसेन्ट नाम दिइएको विरामीको उपचारमा संग्लग्न डाक्टर रविन्द्र गुप्ताले भनेका छन् । एचआइभी संक्रमित विरामीलाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्दै १८ महिना उपचार गरियो । उपचार पश्चात उनको शरिरमा एचआइभी नेगेटिभ देखियो ।बोन म्यारो लिइएको व्यक्तिको जेनेटिभ मुटेसन सि. सि. आर. ५ डेल्टा ३२ थियो । जसले जेनेटिक मुटसेन एच आइ भी सँग लड्ने क्षमता बृद्धि गर्दछ ।
तीन वर्षमा विशेष रेखदेख र औषधी उपचार पश्चात दुनियाको दोस्रो एड्स जित्ने ‘द लण्डन पेसेन्ट’ चर्चाको विषय बनेका छन् । हाल विश्वमा ३.७ करोड एड्स रोगी रहेको जनाइएको छ । यस सफलता सँगै भविष्यमा धेरै विरामीलाई बचाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट क्षति पुगेका...
काठमाडौं । नेपालमा बर्डफ्लुबाट एकजनाको मृत्यु भए...
काठमाडौं । सिंगापुरमा मंकीपक्स भाइरस देखा परेपछि त...